वि.सं. २०४० साल असार महिनाको पहिलो हप्ता। एसएलसी नतिजाको पर्खाइमा थिए, अरुणबहादुर खत्री ‘नदी’
"‘जिन्दगी लामो छ। सधैं सँगै हिँड्न सकिँदो रहेनछ। तर यादहरु कुन कुनै मोडमा आइरहँदो रहेछ,' अरुण बोल्दाबोल्दै भावुक भए। "
संवाददाता - अरुणबहादुर खत्री ‘नदी’/ शनिबार, फागुन ०७, २०७८
वि.सं. २०४० साल असार महिनाको पहिलो हप्ता। एसएलसी नतिजाको पर्खाइमा थिए, अरुणबहादुर खत्री ‘नदी’। एक साँझ लैनचौरस्थित उनले पढेकै स्कुल शान्ति विद्यागृहका जुनियर विद्यार्थी चन्द्र महर्जन उनको नामको पत्र लिएर सामाखुशी आइपुगे। स्कुलको ठेगानामा आएको पत्र देखेर अरुण आश्चर्यमा परे। आफ्नो नाममा कसले पत्र पठायो होला त! कौतहुलता हुने नै भयो। किनभने त्यसअघि न त उनले कहिल्यै कसैलाई पत्र पठाएका थिए, न त उनको नाममा कसैले पत्र पठाएको थियो।
त्यसैले अरुणका लागि त्यो पहिलो पत्र आकाशबाट खसेको ताराजस्तै भयो। चिठीको खाम खोल्न त के, उनी छुनसमेत डराए। घरमा आमा र दिदीहरु थिए। चन्द्रले दिदीको हातमा पत्र थमाएर फर्किए। उनको दिदीले पत्रको खाममा लेखेको ठेगाना पढेर सुनाइन्– ‘किरण भट्टराई, प्युठान जिल्ला, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय।’ ‘मेरो जीवनको पहिलो पत्र थियो त्यो। नचिनेको व्यक्तिले पठाएको चिठी मलाई खोल्न मन लागेन, पछि मेरो दिदीले पढेर सुनाउनु भयो,’ त्यो पहिलो पत्रलाई दिदीले पढेको सम्झिए अरुणले। पत्रको विवरण पढेपछि उनी छक्क परे। उनको नाम र ठेगाना रेडियो नेपालबाट सुनेको भरमा प्युठान जिल्ला निवासी किरणले पत्र लेखी पठाएका थिए। त्यो जमाना थियो, पत्रकै भरमा समाचार आदान–प्रदान हुने, पत्रकै भरमा भावना साट्ने र साथी बन्ने। रेडियो नेपाल होस् या गोरखापत्र अथवा युवामञ्च नै किन नहोस्, सबैले पत्रमित्रतालाई स्थान दिन्थे। र युवाहरु पत्रमित्रता गर्न हौसिन्थे।
अरुणले पनि २०३७ सालदेखि रेडियो नेपालमा बेलुकाको साढे पाँच बजेदेखि ६ बजेसम्म मुनाल घिमिरेले चलाउने बाल कार्यक्रमको नियमित स्रोता थिए। त्यहाँ उनी आफ्नो बालकथा लेखी पठाउँथे। रेडियो नेपालमा जब–जब उनको नाम आउन थाल्यो, उनलाई गाउँगाउँका मान्छेले सम्झिन थाले। याद गर्न थाले। र, उनको नाम र ठेगानामा पत्र आउन थाल्यो, जुन पहिलो पत्र उनै प्युठानका किरणको थियो। ‘एकएक घण्टा कुन युवतीसँग गफिएको? को हो भन् त?,’ आमाले भनेपछि अरुणले ‘केटा साथी हुनुहुन्छ’ भने। तर घरमा आमाले पत्याउनु भएन। अरुण र विवशबीच भने सिर्जनाका कुरा भएका थिए। अरुण भन्छन्, ‘उहाँहरुलाई केटीसँग गफ गरेजस्तो मान्नु भएछ।’
चालिस र पचासको दशकमा अरुणले आफ्नो परिचय नै रेडियो नेपालको नियमित स्रोता हुँ भनेर दिन्थे। रेडियो नेपाल सुन्ने मान्छे सबैका प्यारा हुन्थे पनि। खाजा खान सबै बसबाट झरे र होटलमा खान थाले। खाजा खाने क्रममा आाफूजस्तै सोही बसमा सवार गरिरहेको यात्रुसँग गफिए अरुण। परिचय आदानप्रदान गरे। किरणचन्द्र रायमाझी नामका ती मित्र त उनका पत्रमित्र साथी रहेछन्।
पत्रमित्रतामार्फत भएका साथीलाई खोज्दै हिँड्नु परेन। बरु कहीँ न कहीँ ती साथीहरु भेटिएको किस्सा थुप्रै छन् उनीसँग। संयोग भनौं, उनीसँग पत्रमित्रतामार्फत चिनजान भएका केही साथीहरु त आफ्नै कार्यालय परिसरमा भेट्न पनि पाए। २०५१ सालको एक दिन। अरुणलाई भेट्न उनकै कार्यालयमा ज्ञानमञ्जरी राणा नामकी युवती आइन्। ज्ञानमञ्जरीसँग परिचय भएपछि उनीहरु पत्रमित्र साथी रहेछन्। राणाले अरुणको घर जान चाहिन्। अरुणले पनि घरमा लिएर आए। अरुणकी आमालाई पर्नुपिर पर्‍यो
केही पुरानो पत्रमित्र साथीहरु गोविन्दराज शिवाकोटी बेहोसी, नारायण कटुवाल, छत्र क्षितिज, बेनामी अज्ञात, गणेश पौडेल अन्जान, हेम भण्डारी, दुर्गा घिमिरे, गजेन्द्र बुढाथोकीसँग आजकल सम्पर्क हुन नसकेकोमा उनी दुःखी छन्। सकेसम्म ती पुराना साथीहरुसँग फेसबुक च्याटमै भए पनि बोल्ने रहरमा छन् उनी। २०५२ सालको एउटा किस्सा सम्झिन्छन्।
ब्राजाकीले हवाई पत्रमा निलो डटपेनले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रको सम्झना गर्छन्, ‘तीस पैसाको टिकट टाँसेर निलो डटपेनको हस्ताक्षर सहित मनु ब्राजाकीले पठाएको पत्रले मलाई सधैं पाठक प्रतिक्रिया लेख्न हौसायो।’ पत्रमित्रमार्फत् बनेका उनका साथी बढीभन्दा बढी सिर्जना क्रियाशील थिए। उनीहरु कथा, कविता, मुक्तक तथा गीत लेखिरहन्थे।
‘एकएक घण्टा कुन युवतीसँग गफिएको? को हो भन् त?,’ आमाले भनेपछि अरुणले ‘केटा साथी हुनुहुन्छ’ भने। तर घरमा आमाले पत्याउनु भएन। अरुण र विवशबीच भने सिर्जनाका कुरा भएका थिए। अरुण भन्छन्, ‘उहाँहरुलाई केटीसँग गफ गरेजस्तो मान्नु भएछ।’ अरुण प्रायः पत्रमित्रताका लागि पत्रहरु कोरिरहन्थे। रेडियोमा सुनेको नाम र ठेगाना टिपेर पत्र कोरी पठाउँथे। पत्रको जवाफ पनि आउँथ्यो।
उनका बुवा सैनिक सेवामा थिए। २०४१ सालतिरको कुरा हो। बुवा बर्दिया जिल्लाको गुलरियामा कार्यरत हुँदा उनी खानेपानी संस्थान काठमाडौंमा कार्यरत थिए। केही दिनको छुट्टी मिलाएर उनी हिउँदमा दुई महिनाको छुट्टी लिएर बर्दिया घुम्न निस्किए। कथा/कवितामा पनि कलम चलाउने अरुणलाई थाहा छ– पाठक प्रतिक्रिया लेख्नु भनेको छुचो हुनु हो। रचना र पत्रिकामाथि खोट देखाउनु हो। तर पाठक प्रतिक्रिया सबैले सजिलै स्वीकार्दैनन्। कोही न कोही रिसाइहाल्छन्।
२०६४ सालमा राजेन्द्र विमलको ‘ऐंजेरु’ नामको कथा मधुपर्कमा छापिएको थियो। उनलाई केही कुरामा चित्त नबुझेपछि उनले पाठक प्रतिक्रिया पठाए। मधुपर्कले पनि जस्ताको तस्तै छापिदियो। राजेन्द्र विमलले उनलाई फोन गरे। रिसाए। उनी सम्झिन्छन्, ‘जे भन्नु थियो मलाई भेटेर वा फोनमा भने भइहाल्थ्यो नि किन पाठक प्रतिक्रिया लेख्नुपर्थ्यो भन्नुभयो। रिसाउनु भएको थियो।’ गोरखापत्रपछि २०५० तिर युवामञ्चमा पनि उनले पाठक प्रतिक्रिया र पत्रमित्रता सँगसँगै लेखी पठाउथे। पछि उनले युवामञ्चमा पत्रमित्र र मधुपर्कमा पाठक प्रतिक्रिया लेखी पठाउन थाले।
२०५१ सालमा मुधपार्कमा उनको पहिलो पाठक प्रतिक्रिया छापिएको थियो। उनी ती दिन रक्षा कन्ट्रोलरमा जागिरे थिए। मोहन पौडेलको व्यङ्ग्य र मनु ब्राजाकीको गजलमाथि पाठक प्रतिक्रिया लेखेका थिए।